Rụ ọrụ n'ime ụgbọ mmiri: ọ bụ ezigbo nhọrọ? | Akụkọ Njem
Maria José Roldan | | Cruceros, General
E nwere ọtụtụ mmadụ gburugburu ụwa na-achọ ọrụ ohere nke ga-eju ha afọ, ọ bụghị naanị maka ego ma na ha. Ka ọ dị ugbu a na n'ihi enweghị ohere na ụfọdụ ndị njem njem, ọtụtụ mmadụ chọrọ iji ọzụzụ ha na asụsụ ndị ọzọ dị ka ịrụ ọrụ n’ụgbọ mmiri, mana ọ bụ ezigbo nhọrọ n’ezie?
Rụ ọrụ n'ime ụgbọ mmiri nwere ike ịba uru na ọghọm, mana ọ dị mkpa iburu ihe niile n'uche ka ọ bụrụ na ị kpebie ịrụ ọrụ n'ụgbọ mmiri, ị gaghị akwa ụta mgbe ị nọ n'oké osimiri. Ọ bụ ezie na m dọọla gị aka na ntị na ọ gaghị abụ ihe na-adịghị mma ma ọ bụrụ na ihe ịchọrọ masịrị gị ịkọrọ ndị ọzọ ahụmahụ, zute ndị mmadụ ma nwee oke ọrụ ọrụ.
1 Ihe ị ga-eburu n’obi
1.2 Nwere ike ịchekwa na mgbakwunye inwe ezigbo ụgwọ
2 Mana ọ bụghị ihe niile mara mma
3 Chee echiche nke ọma
Ihe ị ga-eburu n’obi
Ọ bụrụ n’inwe obi ike ịrụ ọrụ n’ụgbọ mmiri, ị ga-eburu n’uche na ọ bụ otu n’ime ọrụ ndị metụtara njem kacha akwụ ụgwọ, yana ọ bụ na mpụga ụgwọ ọnwa ị nwere ike ịnata, ọ nwere ike iru ọtụtụ puku dollar, Onu ogugu di elu di elu. Mana n'ezie, iji rụọ ọrụ n'ụgbọ mmiri, ụfọdụ ụlọ ọrụ anaghị elekọta ụgwọ ị ga-akwụ na Social Security na ndị ọzọ na-ahọrọ ịkwụ ụgwọ na envelopu ekpuchi. N'echiche a, ọ bụrụ n'ịchọrọ ihota, ị kwesịrị ịma maka akụkụ iwu niile ị nwere ike ikwu mgbe ị na-arụ ọrụ n'ụgbọ mmiri.
Mana kachasị mma bụ ịchọta ọrụ n'ụgbọ mmiri na-agba gị ụgwọ ma enwere ike ịdenye aha gị na nchekwa nchekwa. na ụgwọ ọnwa gị n'ọgwụgwụ ọnwa. Agbanyeghị na ọ bụrụ n'ịchọrọ ịrụ ọrụ dịka onye nweere onwe ya ma ha kwụọ gị ụgwọ maka ọrụ enyere, enwere ụlọ ọrụ na-ahụkwa ya ka enwere ike. Yabụ naanị ị ga - agwa onwe gị ka ị chọpụta nhọrọ dị mma maka gị dabere na profaịlụ ọkachamara gị.
Okwu nke ndụmọdụ bụ ihe dị iche iche n'ihi na ha na-abụkarị ego ha na-enye gị n'aka ekele maka ọrụ ị na-enye n'ụgbọ mmiri.
Nwere ike ịchekwa na mgbakwunye inwe ezigbo ụgwọ
Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, ọ bụ ụzọ magburu onwe ya ịchekwa n'ihi na dịka ị ga - anọ ogologo oge na njem njem ụgbọ mmiri, ị gaghị akwụ ụgwọ maka ụlọ, enweghị ọkụ eletrik, mmiri, ma ọ bụ ekwentị . Ihe a niile na-ahụ maka ụlọ ọrụ, ya bụ, ị nwere ụgwọ ọnwa gị yana ụlọ na nri n'efu ma ọ bụrụhaala na ị ga-arụ ọrụ n'ụgbọ mmiri.
Dị ka a ga - asị na ezughi, nri ahụ bụ n'efu n'ihi ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri yana yunifọm na - enye ya. Kedu maka? N'ezie, ọ bụrụ na ị nwaa ịrụ ọrụ n'ụgbọ mmiri, gbalịa itinye akwụkwọ maka ọnọdụ ebe gị na ndị nọ na kọntaktị ahụ nọ ka i wee nwee ike ịnata site na ego ọzọ ahụ bụ ndụmọdụ.
Gịnị banyere oge azụmahịa? Ọfọn, ị kwesịrị ịma na ọrụ ụgbọ mmiri na-achọsi ike. You ga-arụ ọrụ ụbọchị 7 n'izu, n'agbata ihe dị ka awa 70 na 80 kwa izu, agbanyeghị ntụgharị ahụ abụghị ogologo oge dịka ọ na-eme n'ọrụ nkịtị mana ọ bụ isi ntụgharị n'etiti awa 4 ma ọ bụ 6 kwa ụbọchị ma ọ bụ kwa ngbanwe (ikekwe ị ga-arụ ọrụ karịa karịa otu nnofega kwa awa 24).
Okwesiri ikwupụta na ịrụ ọrụ n'ụgbọ mmiri apụtaghị ịgbachi n'ụgbọ niile.. N’ime nke ahụ, oge ọ bụla ndị njem ahụ rutere n’ọdụ ụgbọ mmiri ma mara agwaetiti ndị ahụ, ị ​​nwekwara ike isi n’otu ụzọ ahụ ruo oge ị rụchara ọrụ gị.
Ọ bụrụ n’inwe obi ike ịchụ oge iji gaa njem gburugburu ụwa, ọkachasị ịnata ụgwọ dị ezigbo mma, mgbe ahụ nke a bụ ọrụ kachasị mma maka gị.
Mana ọ bụghị ihe niile mara mma
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ihe m kọwara ugbu a bụ ihe ọnwụnwa, ọ dị mkpa ka ị buru n'uche na ọ bụghị ihe niile mara mma, mana nke a dabere na mmasị gị na ndụ gị.
Mgbe ị na-arụ ọrụ n'ụgbọ mmiri adịghị ka ọrụ nkịtị ị na-arụ ọrụ oge gị kwa ụbọchị ma ị laa n'ụlọ ịnọnyere ezinụlọ gị ma kwụpụ ihe niile. N’ebe ị na-arụ ọrụ n’ụgbọ mmiri ị na-adịghị “kwụpụ” n’ihi na ị ga-arụ ọrụ oge niile, ya bụ, ọ bụrụhaala na oge ị ga-eji aga njem n’ọdụ ụgbọ mmiri. Nkwekorita a ga-agwa gị izu ma ọ bụ ọnwa ị ga-anọrịrị.
Nke a maka ụfọdụ ndị nwere ike isiri ike ịnagide, n'ihi na ọbụlagodi na enwere teknụzụ ọhụụ ma ha nwere ike ịme mkparịta ụka vidiyo na ezinụlọ ha, Ya na ịrụcha ọrụ na ịla ụlọ abụghị otu ihe.
Mmetụta nke owu ọmụma (ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ndị mmadụ gbara gị gburugburu) nwere ike isiri ụfọdụ ndị ike, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na àgwà gị siri ike ma ị chere n'ezie na ọ nwere ike bụrụ ezigbo ahụmịhe na nke ahụ nwere ike ịbawanye ogo nke mmalite gị, mgbe ahụ ọ nwere ike bụrụ ezigbo ohere.
Chee echiche nke ọma
Ọ bụrụ na mgbe ị gụsịrị isiokwu a, ị ka chere na ịrụ ọrụ n'ụgbọ mmiri nwere ike ịbụ ezigbo echiche, egbula oge ịchụ nrọ gị ma ọ bụ ọchịchọ gị.. Ọ nwere ike ịbụ echiche na-eweta ọgaranya nke ga-enye gị ọtụtụ ihe ma ị ga-etolite dịka ndị mmadụ, ị ga - enwe ike izute ndị si n'akụkụ ụwa niile ma sorokwa gị rụọ ọrụ ọnụ.
Yabụ ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ịchọrọ, naanị ị ga-achọ ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri wee kpọtụrụ ha, yabụ ha nwere ike ịgwa gị ihe ndị ị chọrọ iji nwee ike ịnwe ohere na ụlọ ọrụ ha. Ọ bụrụ na ha asị mmadụ, atụfula ya Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri ga-achọ inwe nnukwu mkpali na ịnụ ọkụ n'obi ịrụ ọrụ ndị mmadụ dịka gị.
Mana tupu ịza ee ka ị rụọ ọrụ, ọ dị mkpa ka ị gbaa mbọ hụ na ụlọ ọrụ ahụ nwere ọnọdụ dị mma maka ndị ọrụ ya yana na ị ga-anọ na gburugburu ebe obibi dị ụtọ, ọ bụ ogologo oge ị ga-anọ n'ụgbọ na dịka onye ọrụ, gị nwee ikike na nkwanye ùgwù nke ụlọ ọrụ ahụ ga-agbaso.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Cruceros » Rụ ọrụ n'ime ụgbọ mmiri: ọ bụ ezigbo nhọrọ?
Ndewo, m ga-achọ ịma otu ị ga - esi rụọ ọrụ n'ụgbọ mmiri, enwere m ọtụtụ ahụmịhe dịka onye na - elekọta na mmanya, arụgoro m ọrụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ mba ofesi mana amaghị m onye m ga - akpọtụrụ ka m nwee ike izipu CV na ụgbọ mmiri ma ọ bụ ndị ọrụ mbanye. M ga-enwe ekele maka ozi ahụ
Oge 70/80 n'izu… 4/6 awa n'ụbọchị ??? Anaghị m enweta ihe ndekọ